Jizọs Ana-akụzi Ihe Ka Ha Na-aga Jeruselem | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
MATIU 8:19-22 LUK 9:51-62 JỌN 7:2-10
OTÚ UMUNNE JIZỌS SI WERE YA
OLEE OTÚ IKWUSA OZI ỌMA ALAEZE CHINEKE DỊRURU NÁ MKPA?
Jizọs nọtụrụ ogologo oge na Galili bụ́ ebe ndị mmadụ na-ege ya ntị karịa otú ha si ege ya na Judia. E wezụgakwa nke ahụ, mgbe ọ gwọrọ otu nwoke ahụ́ na-adịghị na Jeruselem n’Ụbọchị Izu Ike, “ndị Juu malitere ịchọsi ike ka ha gbuo ya.”—Jọn 5:18; 7:1.
A nọzi n’ọnwa Septemba ma ọ bụ Ọktoba n’afọ 32, oge a ga-eji eme Ememme Ụlọ Ndò eruwekwala. A na-eme ememme a abalị asaa, nwezie mgbakọ dị nsọ n’abalị nke asatọ ya. Ememme a na-egosi na oge ọrụ ubi nke afọ ahụ agwụla. Ọ bụkwa oge e ji aṅụrị ọṅụ nakwa oge e ji enye Chineke ekele.
Ụmụnne Jizọs, ya bụ, Jems, Saịmọn, Josef, na Judas gwara ya, sị: “Hapụ ebe a gawa Judia.” Jeruselem bụ ebe ndị mmadụ na-agbakọta efe ofufe na Judia. N’oge ememme atọ ndị Juu na-eme kwa afọ, Jeruselem na-ejupụta na mmadụ. Ụmụnne Jizọs gwara ya, sị: “Ọ dịghị onye na-eme ihe ọ bụla na nzuzo mgbe ọ chọrọ ka ọha mara ya. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị a, gosi ụwa onwe gị.”—Jọn 7:3, 4.
N’eziokwu, ụmụnne Jizọs a “enweghị okwukwe” na Jizọs bụ Mesaya. Ma, ha chọrọ ka ndị ga-agbakọta maka ememme ahụ hụ ọrụ ebube ndị Jizọs na-arụ. Ma, Jizọs ma nsogbu ihe ahụ ha na-asị ya mee nwere ike ịkpatara ya. Ọ gwara ha, sị: “Ụwa enweghị ihe mere ọ ga-eji kpọọ unu asị, ma ọ kpọrọ m asị, n’ihi na m na-agba àmà banyere ya na ọrụ ya dị njọ. Gawanụ ememme ahụ; agawabeghị m ememme a, n’ihi na oge m a kara aka eruchabeghị.”—Jọn 7:5-8.
Ụmụnne Jizọs mechara soro ndị ọzọ na-aga Jeruselem gawa. Mgbe abalị ole na ole gachara, Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya si ụzọ ọzọ ebe ndị mmadụ na-agaghị ahụ ha gawa. Ha si ụzọ Sameria, kama isi ụzọ nke dị nso n’Osimiri Jọdan, nke ndị mmadụ na-esikarị. Jizọs zipụrụ ụfọdụ ndị na-eso ụzọ ya ka ha gaa kwadebere ha ebe ha ga-anọ na Sameria n’ihi na ha ga-anọbọ chi n’ebe ahụ. Ma, ndị ebe ahụ jụrụ ịnabata ha n’ihi na ha chọpụtara na Jizọs na-aga Jeruselem maka ime ememme ndị Juu. Ihe a mere ka iwe bịa Jems na Jọn, ha ajụwa Jizọs, sị: “Onyenwe anyị, ị̀ chọrọ ka anyị gwa ọkụ ka o si n’eluigwe daa wee laa ha n’iyi?” (Luk 9:54) Ma, Jizọs baara ha mba maka ikwudị ụdị ihe ahụ ekwu.
Ka ha nọkwa na-aga, otu onye odeakwụkwọ bịakwutere Jizọs, sị ya: “Onye Ozizi, m ga-eso gị gaa ebe ọ bụla ị chọrọ ịga.” Jizọs sịrị ya: “Nkịta ọhịa nwere ọgba, anụ ufe nke eluigwe nwekwara akwụ́, ma Nwa nke mmadụ enweghị ebe ọ ga-atọgbọ isi ya.” (Matiu 8:19, 20) Ihe Jizọs na-ekwu bụ na odeakwụkwọ ahụ ga-ata ahụhụ ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ịghọ onye na-eso ụzọ ya. Ma, ọ dị ka odeakwụkwọ ahụ dị okomoko. Ọ gaghị achọ ịta ahụhụ dị́ n’ịbụ onye na-eso ụzọ Jizọs. Ihe a kwesịrị ime ka onye ọ bụla n’ime anyị jụọ onwe ya, sị: ‘M̀ ji obi m niile chọọ ịbụ onye na-eso ụzọ Jizọs?’
Jizọs gwara nwoke ọzọ ha hụrụ n’ụzọ, sị: “Bụrụ onye na-eso ụzọ m.” Nwoke ahụ zara ya, sị: “Hapụ m ka m buru ụzọ gaa lie nna m.” Ma, Jizọs ma nke bụ́ eziokwu gbasara nwoke ahụ. Ọ bụ ya mere o ji sị ya: “Hapụ ndị nwụrụ anwụ ka ha lie ndị ha nwụrụ anwụ, ma gị onwe gị, gaa kwusaa alaeze Chineke n’ebe niile.” (Luk 9:59, 60) Ọ ga-abụ na nna nwoke ahụ anwụbeghị n’ihi na a sị na ọ nwụọla, ọ ga-esi ike nwa ya nwoke ịnọ ebe a, ya na Jizọs ana-akparịta ụka. O doro anya na nwoke a adịbeghị njikere ime ka ihe gbasara Alaeze Chineke bụrụ ihe kacha ya mkpa ná ndụ.
Ka ha na-agakwa, nwoke ọzọ bịakwutere Jizọs sị ya: “M ga-eso gị, Onyenwe anyị; ma hapụgodị m ka m sị ndị ezinụlọ m ka e mesịa.” Ma, Jizọs sịrị ya: “Ọ dịghị onye ọ bụla nke jidere aka n’ọ́gụ̀ ma na-ele anya n’ihe ndị dị n’azụ nke kwesịrị nnọọ ekwesị maka alaeze Chineke.”—Luk 9:61, 62.
Onye ọ bụla chọrọ ịbụ onye na-eso ụzọ Jizọs kwesịrị itinye uche ya niile n’ozi ọma Alaeze Chineke. Ọ bụrụ na onye ji ọ́gụ̀ na-akọ ihe ana-ele anya ebe ọzọ, ihe ahụ ọ na-akọ nwere ike ọ gaghị adị mma n’anya. Ọ bụrụkwa na o dowe ọ́gụ̀ ya ma lewe anya n’azụ, ọrụ ya ga-agbawa ọnyụpa. Otú ahụ ka ọ dịkwa onye ọ bụla na-ele anya n’azụ ka ọ hụ ihe dị n’ụwa ochie a. Onye ahụ ga-esi n’ụzọ ahụ na-eduba ná ndụ kpafuo.
Olee otú ụmụnne Jizọs si were ya?
Gịnị mere ndị Sameria ji jụ ịnabata Jizọs, gịnịkwa ka Jems na Jọn chọrọ ime?
Ka Jizọs na ndịozi ya na-aga Jeruselem, gịnị ka ya na ụmụ nwoke atọ ha hụrụ n’ụzọ kwurịtara, gịnịkwa ka Jizọs mere ka a mata gbasara ozi Chineke?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Jizọs Ana-akụzi Ihe Ka Ha Na-aga Jeruselem
jy isi 65 p. 154-155